ခတ်တယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ခတ်တယ်
Posted by Nan Shin on Aug 28, 2011 in Creative Writing | 19 comments
ပန်းကန်လုံးကို ဆောင့်ပြီး ခတ်ပြင်းပြင်း ချရင်း ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဓိပ္ပါယ်မပေါက်ဟန်ဖြင့် စ ထိုင်သည့် အချိန်နာရီကို လှမ်းမှတ်ရင်း မင်းနန္ဒမှပြန်မေး
လိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ဟု သိနှင့်ပြီးလည်းဖြစ်သည်။ ကိုကျော်ကြီးသည် သူ၏ ချစ်သူဟောင်း
မစန္ဒာနဲ့ ပတ်သက်၍ ရင်ဖွင့်လိုစိတ် ပေါက်သည့်အခါတိုင်း မင်းနန္ဒ၏ အိမ်သို့လာ၍ “ညီလေးလ္ဘက်ရည်
လ္ဘက်ရည်တခွက် အလကားသောက်ရလည်း မနည်းဘူး ဟူသောသဘောဖြင့် ကိုကျော်
ကြီးဘာပြောပြော၊ ပြောချင်ရာပြော၊ ပြောသမျှကို နားထောင်မည်၊ ထောက်ပေးမည်၊ သူ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ပြည့်လျှင် “ကိစ္စရှိလေးနည်းနည်းရှိသေးလို့ အကိုရေ သွားလိုက်ဦးမယ်”…. ပြောပြီး ထပြန်နေကြဖြစ်သည်။ ကိုကျော်ကြီးမှာလဲ သူ၏ မစန္ဒာအကြောင်းကို ရင်ဖွင့်လွန်းလှ၍ မင်းနန္ဒမှလွဲ၍ မည်သူမျှ နားမထောင်လိုကြသည် ကို သိ၍ မိမိ၏ စကားကို နားထောင်ပေးမည့် မင်းနန္ဒ အားကိုသာ အမြဲလာခေါ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
အမူအရာ နှင့်ပြောပြီး မည်သည်အရာ ကိုကြည့်မှန်းမသိ စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်နေလိုက်သည်။
မင်းနန္ဒကတော့ ကိုကျော်ကြီး ကြည့်နေသည့် ဘာရယ်မဟုတ်သည့် လေဟာနယ်တ
နေရာတွင် မစန္ဒာ၏ အပြုံးတချို့ ရှိနေလိမ့်မည်ဟု သိထားသည်။
သည့်အနေဖြင့် စကားကို ဆက်ထောက် ပေးလိုက်ပြီး အလွန်တရာမှ စိတ်ဝင်စားလှသည့်
“သိပ်ကောင်းလို့ ခက်တာပေါ့ကွ……… ငါက သူ့ကို ရည်းစား စကားစပြောတဲ့အ
အတိတ်က အရိပ်တခုကို မြင်ယောင်လာပြီး အလွန်ဆွေးမြေ့လှသော အသံဖြင့်ပြောသည်။
အစီခံ ထိရောက်အောင် ဖွာထားပြီးပြီဖြစ်သော ဖက်ကြမ်းဆေးလိပ်တိုကို လက်ထဲမှ အဝေး တ နေရာသို့ တောက်ထုတ်လိုက်ပြီး အသစ်တလိပ်ကို ထပ်မှာလိုက်သည်။
တဲ့ ငါး ကြီးနေရမဲ့ အဖြစ်မျိုးကိုလဲ ငါမလိုလားဘူးကွ…. ဒါကြောင့် သူ ငါ့ကိုချစ်နေပါလားဆို
တဲ့ အသိတဝက်နဲ့ ပြောလိုက်မှ ဝေးသွားစိုးတဲ့ စိုးရိမ်တို့ရဲ့ ခြောက်လှန့် မှုကြောင့် …အီစီ
“အေး ..အဲ့ဒါလည်း ခက်တာပဲကွ… ငါကိုကလည်း အသဲအသန် ချစ်နေမိတာ
လေ…ဒါပေမဲ့…….ငါတွက်ထားတာက”… ဟုပြောပြီး ဘာမှဆက်မပြောတော့ ပဲစားပွဲထိုးလာချသော ဖက်ကြမ်းဆေးလိပ်ကို ကောက်ယူ၍ မီးညှိလိုက်သည်။
“ ခက်တယ် ညီလေးရဲ့ လောကကြီးကပဲ ဆန်းကြယ်နေတာလား ငါကပဲဆန်းကြယ်
နေတာလားတော့ မသိဘူးကွ သူ့ရဲ့အပြုအစု အယုအယတွေကို ခံခဲ့ရလို့…သိပ်ပြီး ဂုဏ်ယူခဲ့ဘူးတယ်ကွ”…
“ခက်တယ်ကွ….အခုတော့လဲ” ဟုပြောပြီး… ဆက်ပြောရန် ဝေါဟာရ အသစ်တခုကို
စဉ်းစားနေစဉ်မှာ မင်းနန္ဒက “ဒါတွေ …ဒါတွေ ပြီးခဲ့ပါပြီ ပြီးခဲ့ပါပြီ… လို့တော့ မပြောနဲ့နော်
မပြီးသေးလို့ခက်နေတာ မဟုတ်လား” ဟုပြောပြီး ဆိုင်တွင်း၌ချိတ်ထားသော တိုင်ကပ်နာရီကို မသိမသာ လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။
နာရီ လှမ်းကြည့်လိုက်သည် ကိုရိပ်မိသော ကိုကျော်ကြီး က သူ ပြောချင်သောစကား
များကို နောက် ဆယ်ငါးမိနစ်သာ ပြောခွင့်ရတော့မည် ကိုသဘောပေါက်လိုက်သည်။
ရောက်နေတာ မိနစ်သုံးဆယ်ရှိပြီဖြစ်၍ နောက်ထပ် ငရဲခံရန်ဆယ့်ငါးမိနစ်သာ လိုတော့တယ်” ဟုတွေးပြီး…ငြိမ်သက်နေသည်။
“သူက ဟင်းချက် ပျင်းတယ်လို့ မကြာမကြာပြောတယ်… ဒါပေမဲ့ ငါစားချင်တယ်
ဦးလေးတွေ ဘယ်လောက်ဆူဆူ မရောက်ရောက်အောင်လာတယ်.”…
ဖင်တကြွကြွ ဖြစ်နေသော မင်းနန္ဒက စိတ်မပါ့တပါဖြင့် စကားကိုထောက်ပေးလိုက်သည်။
“အဲ့ဒါကို ငါမငြင်းပါဘူး… တကယ်ဆိုရင် မင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းကွာ… မိန်းမပျက် မဟုတ်တဲ့ မိန်းကလေး တယောက်ဟာ တော်ရုံတန်ရုံ အချစ်စိတ် လောက်နဲ့တော့ ဘီယာဆိုင်တို့ အရက်ဆိုင်တို့မှာ လိုက်ထိုင်ပါ့မလားကွာ.”….
တော့.”….. ဆက်မပြောဘဲ ရပ်ထားလိုက်သည်။ ကိုကျော်ကြီး ပြောမည့် စကားများကိုမြန်
“ဘဝကြီးတခုလုံးကိုပေးဆပ်ပြီး ချစ်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့.”.. အသက်မဲ့သော အပြုံးနှင့် ကြည့်၍ မင်းနန္ဒက ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“အေးကွာ …ဒါပေမဲ့.. တန်ပါတယ်..ခက်တာက…”
ခက်တယ် ဟု ပြောလျှင် စကားကြော ရှည်တော့မည်ကို သိသော မင်းနန္ဒက “ဒါနဲ့ထ္မင်းတောင် သူကပဲခွံ့ကြွေးတာဆို” ဟု စကားလမ်းကြောင်းကို လွှဲပြစ်လိုက်သည်။
“ဟာဒါဆိုရင် တခြားစွဲမက်စရာလေးတွေရှိဦးမှာပေါ့ ပြောပြပါလား.”…
ရင်းနဲ့တောင် ပြန်မြင်လာပြီကွာ” ဟုပြောရင်း… အသံများတုန်ခါလာ၍ မင်းနန္ဒက စိတ်ခံစားမှုအရှိန်ပါဝါ မြင့်တက်လာပြီ ဟုသိလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် “အော် ဟုတ်လား” ဟု ဝိုင်းဝန်းခံစား နားလည်ပေး သည့်မျက်နှာထားနှင့် မေးလိုက်သည်။
လေးဆယ်ငါးမိနစ်လဲ ပြည့်နေပြီမို့ စကားဖြတ်ရန် အချိန်တန်ပြီပြီဖြစ်၍ မင်းနန္ဒက
“ အဲ့ဒါကို ငါက ခက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ကွ..” ခုံကို လက်သီးနှင့် ခပ်ပြင်းပြင်းထု
မင်းနန္ဒကလည်းအဆုံးသပ်ချင်လှပြီမို့..”တခက်တည်းပဲခက်နေတာပဲဗျာ…ဘာကိုခက်မှန်းလဲမသိဘူး” ဟု ဒေါပွသည့်လေသံဖြင့် ပြောလိုက်သော်လည်း စိတ်ထဲမှာတော့ သူပြောလာမည့် စကားကိုကြိုသိနေ ၍ကြိတ်ပြီးပြုံးနေမိသည်။
ထိုအခါမှ ကိုကျော်ကြီးမှာ.. မျက်နှာသေလေးနှင့် တစက္ကန့် အတွင်း စကြာဝဠာတခုလုံးကို ကိုးပတ်ပြည့်အောင် ပတ်နိုင်လောက်သော စိတ်အစဉ်ဖြင့်ပြောလိုက်သည်။
ခက်လွန်းလို့ …ရှင်းလို့ မရတော့ဘူး
အမလေးနော် ခက်လိုက်တာများ။အဓိပ္ပာယ်တခုတော့ သွားရိပ်မိပါတယ်။ပြောမထွက်ပါဘူး!!!
နန်းရှင်က တကယ်စာရေးကောင်းသူပဲ။ ဆက်ပြီး အခုလို့ စာများဖတ်ရဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။ အားပေးလျက်ပါ…။ ရွာထဲမှာ ကိစ္စရှိလည်း ပြောပါ၊ အကူအညီ မပေးနိုင်ပါဘူး…။
ဖတ်လို့ ကောင်းလွန်းလို့ 
ဘာကွန်မင့် ရေးရမှန်းမသိအောင် ကို
ဘရာကြော် ၊ အဲလေ ၊ ယောင်လို့ 
ခတ္တာလား ခက်တာလား…။ စဉ်းစားမရဘူးဖြစ်သွားတယ်……
နန်းရှင်က စာရေးတာ အတော်ကောင်းတာပဲ။ အားပေးနေပါတယ်။ မှီဆို အဲ့လို စိတ်ကူးယဉ်ပြီး လုံးဝမရေးတတ်ဘူး။ စဉ်းစားလို့ကို မရတာ။
ခက်တာ က ၄၅ မိနစ်တန် လက်ဖက်ရည် တခွက် ထင်ပါရဲ့
ရော် ခက်ကပြီ ခက်တော့တာပါပဲ တစ်ကယ်ခက်ရတဲ့ ဇတ်လမ်းပါပဲ
နောက်ထပ်ခက်တာလေးတွေ လဲ ခက်ပါရစေလား…။
နားထောင်ရခက် စဉ်းစားရခက် ရှည်လျားထွေပြား ခက်ခဲလှချည်လား..။
စာလုံးပေါင်းမှားရင် ဘယ်လိုပြန်ပြင်ရမလဲ သိပါရစေချင်ဗျာ။
သဂျီးပြောတာကတော့ မန်းဂေဇက်မှာ သက်တမ်းရင့် ဝါရင့်တဲ့ သူတွေ သာလျှင် ရတယ် တဲ့..
ဥပမာ ကျနော့်လို လူမျိုးပေါ့..
၄၅ မိနစ်ဆို လ္ဘက်ရည်တခွက်နည်းတယ်ဗျ။ နောက်တခါဆို ဒန်ပေါက်တပွဲရမှ နားထောင်မယ်ဆိုပြီး ဈေးတက်လိုက်။
ဒီပုံအတိုင်း ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စာရေးဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်နှိုင်ပါတယ်…
မဂ္ဂဇင်း တစ်ခုခု ပို့ကြည့်ပါလား…
ခက်တယ် ဆိုတာလေးကိုပဲ ကြိုက်သွားပါသည်။
ခက်တယ်ဗျာ..။ ခက်တယ်။..တကယ်ကိုခက်တာ ပဲ..။ လူတိုင်းအပေါ်ကို ဒီလိုသာဆိုရင်တော့ တော်တော်လေးကို ခက်မှာပဲ…ဗျာ.။ ခက်တယ်ဗျာ..။
နောက်ဆုံး အဆုံးသတ်လေးကို သဘောကျတယ်
အားပေးနေပါတယ် ဆက်ေ၇းပါဦး ….